Trano fandraisam-bahiny trano fandraisam-bahiny - trano fonenana tandrefana Bucharest - Nobili Interior Design, studio, architect, designer, organs, design, prices
Ny tetikasa fanarenana anatiny izay ataontsika ho an'ny trano, trano fonenana ary trano fonenana dia manintona foana ny fomba fisainana, ny filaminana sy ny filan'ny fianakaviana tsirairay. Ny drafitra sy ny fanatsarana ny habaka dia anisan'ny laharam-pahamehana amin'ny tetikasa fanorenana anatiny. Manolotra ny vahaolana sy ny soso-kevitra 3 D natao ho an'ny fenitra ambony miaraka amin'ireo fitaovana sy vokatra avo indrindra. Tetikasa avy amin'ny portfolio-Atitany famolavolana ny trano, lafo vidy raitra atao amin'ny fomba mahazatra amin'ny endrika ankehitriny anatiny turnkey tolotra in Constanta, Bucarest, Ploiesti, Brasov, Galati.
Ny tetikasa portfolio-fanorenana trano maoderina maoderina
orinasa Nobili Interior Design dia nanomboka namolavola tetikasa fanorenana anatiny ho an'ny trano fonenana sy trano fonenana hatramin'ny 2008. Ho antsika, tsy vitan'ny hoe asa fotsiny izany, fa ampahany manan-danja amin'ny fiainana. Ny traikefantsika sy ny halalin'ny fahalalantsika dia nanome antsika fahafahana ho lasa iray amin'ireo trano fandraisam-bahinin'ny trano fandraisam-bahiny malaza sy lehibe indrindra any Romania. Ny tetikasam-panorenana anatiny rehetra dia tsy manan-tsahala sy manana ny maha-izy azy raha jerena ny trano sy ny trano anatiny ary ny zavatra ilain'ny mpanjifa. Hatreto, nahomby izahay tamin'ny tetikasa 150 fanorenana trano ho an'ny trano klasika efitra ambanin'ny tafo, raitra amin'ny tany, ary efa ho 100 fitantanana tetikasa fanompoana dia manolotra fanaterana ny fitaovana ho an'ny famolavolana anatiny. Ny ekipa afaka mampiasa fitaovana rehetra azo atao sy ny teknolojia, famolavolana fomba rehetra avy amin'ny kilasika, Santionan'izany fiangaly, kilasika vaovao ny maoderina Mediterane na skandinavianina hanao anao manokana fomba fiaina an-trano. Raha mikasa ny hividy ny anatiny famolavolana tetikasa, amin'ny portfolio-ny asa atao amin'ny ny orinasa, izay afaka manampy anao hanapa-kevitra eo amin'ny fomba tsara indrindra ny amin'ny tranonao na trano. Classic trano lafo vidy amin'ny efitra ambanin'ny tafo trano amin'ny fomba maoderina tany Mediterane raitra, dia miara-miasa amin'ny rehetra, karazana trano manerana ny firenena, anisan'izany ny Bucarest, Giurgiu, Brasov, Ploiesti, Constanta, Braila, Tulcea sy Galati.
Fandrafetana trano fandraisam-bahiny trano maoderina - trano fialan-tsasatra fanorenana trano fanorenana Bucharest - Nobili Interior Design